UMTHANDENI “Igcokama Elisha” Manqele
MHLELI: Ngiyakhuleka kunina beSilo, ngiyabingelela kuso sonke isizwe samabhinca. Ngiyazi ukuthi sonke siyalithanda kakhulu Isolezwe. Ngithi angibhale lapha njengenduna yabalandeli bomculo kamaskandi engacheme namculi.
Ngithanda ukuthi ngibongele uMthandeni “Igcokama Elisha” Manqele ngempumelelo yakhe. Sonke isizwe samabhinca sibonile ukuthi usesayine nenkampani enkulu yamaselula. Sekunama-sim card anekhanda lalo Igcokama Elisha.
Lokho kusho enkulu impumelelo kule nsizwa yaseMdletsheni. Uma ubheka ngampela manje umculo kamaskandi indlela osungene ngayo kubantu, kuyajabulisa.
Igila izimanga nangendlela le nsizwa yaseMdletsheni efike yafaka ngayo inhlanzeko ebantwini.
Amabhinca amaningi manje adla ukotini ngakho njalo ukubukela kuyo le nsizwa ezalwa uMaMbatha. Siphinde sabona futhi ukuthi lowo owayengumsakazi woKhozi FM, uNgizwe Mchunu, usethengiwe njalo yilo Igcokama Elisha lamkhokhela ukuthi azoba yigidangoma aphinde abe yinxusa lalo.
Kusho ukukhula kuMthandeni manje ngale mpumelelo yakhe.
Sengiphetha, ngiyafisa Mthandeni mfo kaManqele kube khona nje abantwana ozofaka isandla kubo ngemifaniswano yesikole uma kuvulwa izikole ngonyaka ozayo.
Ngiyazi abazali abaningi baye bathwale kanzima abangasebenzi uma izingane sezibuyela ezikoleni ngonyaka omusha.
Ngiyazi Ndlabeyiphika, uma sesikhulumile uyenza. Uma abaculi benza kahle futhi bephumelela siyobabongela ngoba umona asinawo. Qhubeka njalo Gcokama Elisha uwumele umaskandi, Ngiyabonga!